Aakhriso:-Halkee ayay ku dambeeysay Xiisadii siyaasadeed ee Dowlad Deegaanka? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Aakhriso:-Halkee ayay ku dambeeysay Xiisadii siyaasadeed ee Dowlad Deegaanka?
By Webmaster	 On Jan 28, 2019
Waxaa maalmihii dambe magaalada Jigjig ka tagnaa xiisad siyaasadeed oo la sheegay inay u dhaxeesay madaxweynaah deegaanka, Mustafe Muxumed Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka maaliyadda ee Itoobiya Axmed Shide.
Khilaafkaasi ayaa waxaa uu horseeday in madaxweynaha deegaanka iyo Axmed Shide ay labaduba iska xaadiriyaan magaalada Addisababa, halkaais oo ay kula kulmeen ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Inkastoo aan war rasmi ah laga helin waxyaabihii ay ka wada hadleen Abiy Axmed, Axmed Shide iyo Mustafe Cagjar ayaa haddana war kooban oo lasoo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra’iisul wasaaraha waxaa lagu sheegay sidatan.
“Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa kullan wadatashi ah la qaatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafe Muxumed Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide. Wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihii horumarka iyo ammaanka gobolka, waxaan Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay wada shaqeyn doonaan, si loo xoojiyo horumarka deegaanka”
Ilo ku dhaw labada dhinac ayaa BBC-da u sheegay in aysan jirin wax rasmi ah oo la isku afgartay, balse lagu heshiiyay in 30-ka bisha Janaayo la isugu yimaado magaalada Jigjiga, si halkaasi looga sii amba qaado arrimaha xisbiga, oo khilaafka ugu badan ee labada dhinac uu ku salaysan yahay.
Labada dhinac wali ma isku maqan yihiin?
Guddoomiyaha xisbiga, Axmed Shide ayaa markii madaxtooyada Itoobiya uu kula kulmay Mustafe Cagjar waxaa la sheegay in uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono madaxweynaha deegaanka, balse dadka indha indheeya siyaasadda waxay aaminsan in mid walba uu u tafaxeedanayo doorashada xisbiga iyo sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa xubnaha kamid noqonaya xisbiga.
”Waxa la isku hayo waa awoodaha iyo sidii loo maareyn lahaa, ra’iisul wasaraha dalkana waxaa muuqata in uu yiri waxa la isku hayo soo khilaafka xisbiga ma ahan? Haa, doorashada xisbiga dhaqso hala qabto, waxaana hadda muuqato in doorashadii la isku diyaarinayo”.Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ciid Badal Maxamad oo ka faaloda arrimaha siyaasadda geeska Afrika.
Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa ka dhalatay qaabka loo wajahayo xubnaha kamid noqonaya golaha fulinta ee xisbiga , waxaana la sheegay in madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafe Muxumed Cagjar oo haatan ku sugan magaalada Nairobi uu doonayo in xubna cusub ay nqodaan golaha fulinta ee xisbiga halka Axmed Shide oo isna ah gudoomiayah xisbiga uu doonayo in qaar kamid ah xubnihii hore ay kamid noqdaan xisbiga.
Inkastoo aanan lagu dhawaaqin xiliga la qabanayo doorashada xisbiga ayaa waxaan la ogeyn cida kamid noqoneysa xubnaha xisbiga iyo qaabka loo wajahayo arrintasi oo xaaladda degenaasho la’aan ka dhalisay deegaanka.
Maadaamma ay weli taagan tahay arrintii la isku khilaafsanaa ee xisbiga, ayaa dad badan waxay is weydiinayaan, degganaanta siyaasadeed ee kulankii Abiy Axmed uu la yeeshay Mustafe iyo Shide kaddib, ma waxay astaan u tahay in la heshiiyay iyo in weli la isku maqan yahay.
Balse astaamaha haatan taagan waxay muujinayaan in labada dhinac ay joojiyeen farriimihii ay warbaahinta isu marinayeen si xiisadda loo dejiyo, balse aysan jirin wax heshiis ah oo la gaaray.
Daawo:-Hooyo Xaliimo”Curadkeyga aniga oo lugeynaayo aan wadada ku dhalay nafaqa darro ayuu iiga geeriyooday”